Ingersoll Rand Air ကိုကွန်ပရက်ဆာကို Maintenance Filter - Airpull (ရှန်ဟိုင်း) Co. , Ltd မှ Filter
A. အ Air ကို filter ကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု
တစ်ဦး။ အဆိုပါ filter ဒြပ်စင်တစ်ပါတ်တစ်ကြိမ်ထိန်းသိမ်းထားရပါမည်။ အဆိုပါ filter ကိုဒြပ်စင်ထဲကယူ, အဲဒီနောက် filter ကိုဒြပ်စင်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ဖုန်မှုန့်ပယ်သွားမှုတ်ဖို့ 0.4Mpa compressed လေကြောင်းရန် 0.2 ကိုအသုံးပြုပါ။ လေထု filter ကို shell ကို၏အတွင်းပိုင်းနံရံပေါ်ကဖုန်တက်သုတ်ဖို့စင်ကြယ်သောအထည်ကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးချ။ ထို့နောက် filter ကိုဒြပ်စင် install လုပ်ပါ။ install လုပ်သောအခါ, တံဆိပ်ခတ်လက်စွပ်လေထု filter ကိုအိုးအိမ်မှတင်းတင်းကျပ်ကျပ်မထိုက်မတန်ဖြစ်သင့်သည်။
ခ။ ပုံမှန်အားဖြင့်, အ filter ကိုဒြပ်စင် 1500 နာရီမှ 1000 နှုန်းဖြင့်အစားထိုးသင့်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကိုမိုင်း, ကြွေထည်မြေထည်စက်ရုံ, ဝါဂွမ်းကြိတ်, သည်အတိုင်း, ရန်လိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုလျှောက်ထားသောအခါ, 500 နာရီနှုန်းဖြင့်အစားထိုးခံရဖို့အကြံပြုသည်။
က c ။ အဆိုပါ filter ကိုဒြပ်စင်သန့်ရှင်းရေးသို့မဟုတ်အစားထိုးသောအခါ, ဝင်ပေါက်အဆို့ရှင်သို့ရတဲ့နိုင်ငံခြားကိစ္စရပ်များကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။
ဃ။ သင်မကြာခဏ extension ကိုပိုက်၏မည်သည့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုသို့မဟုတ်ပုံပျက်သောလည်းမရှိရှိမရှိစစ်ဆေးခြင်းသင့်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်သင်ပူးတွဲချောင်ဖြစ်ပါတယ်သို့မဟုတ်မရှိမရှိစစ်ဆေးရန်ရှိသည်။ အထက်တွင်ဆိုပြဿနာတည်ရှိဆိုပါတယ်လျှင်, သင်အချိန်မီပြုပြင်ဖို့ရှိသည်သို့မဟုတ်သူတို့အားအစိတ်အပိုင်းများအစားထိုးလိုက်ပါ။
ခရေနံ Filter ကိုအစားထိုး
တစ်ဦး။ သငျသညျ 500 နာရီကြာ operated ထားပြီးဖြစ်သောသစ်ကိုလေကြောင်းတွန်းအဘို့, ဆက်ကပ်အပ်နှံလိမ်ဖဲ့ခြင်းနှင့်အတူသစ်ကိုရေနံ filter ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ အသစ်က filter ကို၏ installation မတိုင်မီကကဝက်အူရေနံ add, အဲဒီနောက် filter ကိုဒြပ်စင်တံဆိပ်ခတ်ထားမှလက်ဖြင့်ကိုင်ဆောင်ထားသူဝက်အူဖို့အများကြီး သာ. ကောင်း၏။
ခ။ ဒါဟာ filter ကိုဒြပ်စင် 2,000 မှနာရီ 1500 နှုန်းဖြင့်အစားထိုးသင့်ကြောင်းအကြံပြုသည်။ သငျသညျအင်ဂျင်ကရေနံကိုပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာ, သင်ကိုလည်း filter ကိုဒြပ်စင်ကိုပြောင်းလဲသင့်ပါတယ်။ လေထု filter ကပြင်းထန်လျှောက်လွှာပတ်ဝန်းကျင်တွင်လျှောက်ထားလျှင်အစားထိုးသံသရာ, ကိုတိုစေရပါမည်။
က c ။ အဆိုပါ filter ဒြပ်စင်တော့ဘူးင်း၏ဝန်ဆောင်မှုဘဝထက်ကိုအသုံးပြုခံရဖို့တားမြစ်ထားသည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သူကအလေးအနက်ထားပိတ်ဆို့ပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါ differential ကိုဖိအားအဆို့ရှင်အများဆုံးဖြစ်စေသောစပါးစွမ်းရည်ထက်ကျော်လွန်ဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်ကရှောင်အဆို့ရှင်ကိုအလိုအလျောက်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအခွအေနေအရ, အညစ်အကြေး, အရှင်လေးနက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတွက်ရရှိလာတဲ့, ရေနံနှင့်အတူအင်ဂျင်သို့ရပါလိမ့်မယ်။
C. Air ကိုရေနံခြားအစားထိုး
တစ်ဦး။ တစ်ခုကလေထုရေနံသီးခြားစီချုံ့လေကြောင်းကနေချောရေနံဖယ်ရှားပေးပါသည်။ ပုံမှန်လည်ပတ်မှုအောက်တွင်၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုအသက်သည်ချောရေနံအရည်အသွေးနှင့် filter ကို Fine ကလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်သည့် 3000 နာရီသို့မဟုတ်ဒါ၏ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစက်ဆုပ်ရွံ့ရှာဘွယ်သောလျှောက်လွှာပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာ, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသံသရာကိုတိုစေရပါမည်။ ထို့အပြင်တစ်ဦးကြိုတင်လေထု filter ကိုထိုကဲ့သို့သောအမှု၌လေထု Compressor ရဲ့ပုံမှန်လည်ပတ်စေရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။
ခ။ လေထုရေနံ separator ကြောင့်ဒါမှမဟုတ် differential ကိုဖိအား 0.12Mpa ထက်ကျော်လွန်သည့်အခါသင် separator ကိုအစားထိုးသင့်ပါတယ်။